विश्व – Page 463 – Etajakhabar
चीनका मुख्य सहरमा घरको मूल्य थेग्नै नसक्ने गरी बढ्यो
बेइजिङ, २ असोज । आवासीय भवनहरुको मूल्य वृद्धि थेग्नै नसकिनेगरीे बढेकोमा चिनियाँ नागरिक चिन्तित भएका छन् । चीनको केन्द्रीय बैंकले २० हजार नागरिकमाथि गरेको अध्ययनका अनुसार ५३.७ प्रतिशत नागरिकले आवासीय भवनहरु मुल्य बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बैंकले प्रस्तुत गरेको तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदनमा ०.३ प्रतिशत भन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ । चौथो चौमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा ...
आक्रमणकारीलाई कडा सजाय दिने मोदीको अठोट
नयाँदिल्ली, २ असोज । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत अधिनस्थ कश्मिरमा सरकारी सेनामाथी भएको आक्रमणको कडा शव्दमा निन्दा गर्नुभएको छ । भारत अधिनस्थ काश्मिरको उरीमा रहेको सैनिक प्रधान कार्यालयमा १७ जना भारतीय सेनाको ज्यान जानेगरी भएको आक्रमणलाई प्रधानमन्त्री मोदीले अमानवीय र क्रुर घटनाको संज्ञा दिनुभएको छ । “क्रुर आतङ्ककारीहरुद्वारा काश्मिरमा गरेको घृणित घटनाको हामी कडा शव्दमा निन्दा ग...
अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको बम विस्फोटमा २९ घाइते
न्युयोर्क, २ असोज । अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यको छिमेकमा पर्ने चेल्सीमा शनिवार भएको बम विस्फोटनमा परी कम्तीमा २९ जना घाइते भएका छन् । यद्यपी यस क्षेत्रमा आतङ्कको प्रत्यक्ष सहभागीता नरहेको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । घाइतेहरुको उपचार भइरहेको र एक जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको प्रहरीले जनाकारी दिएको छ । “प्रारम्भिक समाचारअनुसार घटनास्थलमा विस्फोट गराउने आतङ्ककारीका कुनै प्रमाण फेला परेका छैन...
हिलारीलाई भोट ओबामाको आह्वान
वासिङटन, २ असोज । अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फका राष्ट्रपति उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई मतदान गर्न अफ्रिकन मुलका अमेरिकी नागरिकलाई आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले शनिवार आयोजित रात्रि भोजमा व्यक्तिगत आह्वान गर्दै भन्नुभयो, “अफ्रिकन मुलका हामी सबैले क्लिनटनलाई मतदान गर्न चुक्नु हुदैन ।” ओबामाले मतपत्रमा छापिने क्लिनटनको नाम अफ्रिकन मुलको नाम नभएपनि अफ्रिकन मुल...
काश्मिरमा सैनिक प्रमुख कार्यालयमा आतङ्ककारीद्धारा भएको आक्रमणमा परी १७ सैनिककाे मृत्यु
श्रीनगर, २ असोज- भारत अधिनस्थ काश्मिरमा रहेको सैनिक प्रमुख कार्यालयमा आइतबार आतङ्ककारीद्धारा भएको आक्रमणमा परी १७ सेनाले ज्यान गुमाएका छन् । सैनिकको उत्तरी कमाण्डले सो जानकारी दिएको छ । यस आक्रमणको क्रममा उरीस्थित सेनाले गरेको जावाफी कारबाहीमा चार आतङ्ककारीको पनि मृत्यु भएको छ । यस आक्रमणमा १७ सैनिकले आफ्नो बलिदान दिएको सैनिकको उत्तरी कमाण्डद्धारा ट्वीटरमार्फत जानकारी दिएको छ । भारत अधिनस्थ काश...
अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा बिस्फोट, कम्तिमा २५ जना घाइते
असाेज २ गते– अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा बिस्फोट भएको छ । बिस्फोटनमा परि कम्तिमा २५ जना घाइते भएको अमेरिकाको अग्नी विभागलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको छ । न्युर्योकको म्यानहटनमा बिस्फोट भएको हो । बिस्फोटको कारण अहिलेसम्म थाहा नभएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । नेपाली समय अनुसार बिहान पौने तीन बजे विस्फोट भएको हो । न्युजर्सीमा पाइप बम बिस्फोट भएको केही घण्टा भित्रै न्युर्योकमा विस्फोट भएको हो...
इजरायल नियन्त्रित गोलनहाइटमा सिरियाली रकेट खसालियो
इजरायल, १ असोज । इजरायलको आइरन डोम प्रतिरक्षा प्रणालीले सिरियाबाट इजरायल नियन्त्रित गोलनहाइटमा लक्षित गरी हानेको क्षेप्यास्त्र खसालेको इजरायली सेनाले जनाएको छ । यसले दुई परस्पर सशङ्कित छिमेकी राष्ट्रहरु सिरिया र इजरायलको सम्बन्धमा थप तनाव देखिएको छ । “इजरायलले शनिबार सिरियाबाट हानिएको क्षेप्यास्त्रलाई आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीको सहयोगमा खसालिदिएको, इजरायली सेनाले शनिबार जारी गरेको एक विज्ञप्त...
सिरियाको युद्धबिराम भङ्ग भएमा यसको जिम्मेवारी अमेरिकाले लिनुपर्ने रसियाको भनाई
रसिया, १ असोज । सिरियामा भएका युद्धबिराम भङ्गका छिटफुट घटनामा अमेरिकाले आफ्नो भूमिकालाई बहन नगरेका कारण भएको भन्दै रसियाली सेनाले यदि सिरियाको युद्धबिराम भङ्ग भएमा यसको जिम्मेवारी अमेरिकाले लिनुपर्ने बताएको छ । “यदि अमेरिकी पक्षले सिरिया युद्धबिरामलाई निरन्तरता दिलाउन आफ्नो दायित्वलाई निर्वाह नगरी युद्धबिराम अन्त्य भएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अमेरिकाले लिनुपर्छ,” रसियाली सेनाका वरिष्ठ सैनिक ज...
अमेरिकाको टेक्सासमा गोली लागि दुई प्रहरी अधिकृत घाइते
होस्टन (संयुक्त राज्य अमेरिका), १ असोज । अमेरिकाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने टेक्सास राज्यमा शुक्रबार राति गोली लागी दुई जना प्रहरी अधिकृत घाइते भएका छन् । स्थानीय समय अनुसार राति ८.३० बजे टेक्सासको फोर्ट वर्थमा रहेको निजी आवासीय क्षेत्रमा यो घटना भएको अंग्रेजी दैनिक डालस मर्निङको वेबसाइटले जनाएको छ । घाइते मध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र अर्का एक जनालाई छातीमा गोली लागेपनि बुलेटप्रुफ लगाए...
होस्टन, १ असोज । अमेरिकाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने टेक्सास राज्यमा शुक्रबार राति गोली लागी दुई जना प्रहरी अधिकृत घाइते भएका छन् । स्थानीय समय अनुसार राति ८.३० बजे टेक्सासको फोर्ट वर्थमा रहेको निजी आवासीय क्षेत्रमा यो घटना भएको अंग्रेजी दैनिक डालस मर्निङको वेबसाइटले जनाएको छ । घाइते मध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र अर्का एक जनालाई छातीमा गोली लागेपनि बुलेटप्रुफ लगाएको कारण सामान्य चोट मा...
Previous 1 … 462 463 464 … 515 Next
-19507 second ago
सोसल मिडियामा शाहरुख खानकी छोरीले गरिन् यस्ताे हर्कत !
-18470 second ago
-17412 second ago
-16214 second ago
-14715 second ago
तेह्रथुमको आफ्नै जन्मघरमा जन्मदिन मनाएका ओलीले, नेपाललाई टुक्राटुक्रा पारेर केक खुवाए, ओलीलाई राज्यद्रोहीको मुद्दा लाग्न सक्ने !
-13930 second ago
महरा र गोकुल बास्कोटाको कर्तुत सार्वजनीक गर्ने पत्रकार सिवाकोटीलाइ कसले दियो ध:म्कि ?
-12498 second ago
जनप्रतिनिधि हुनु त यस्तो पो, आफूलाई सवारीसाधन खरीद गर्न छुट्याइएको बजेटले दुई एम्बुलेन्स खरिद गरिन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी बर्तौलाले !
-11574 second ago